कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार - बहस - नारी
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ मंसिर ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । नेपालमा यस्ता कतिपय ऐन-कानुन महिलाका पक्षमा बनेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । सामाजिक परम्परा एवं पुरातन सोचका कारण महिलामाथि विविध हिंसा तथा विभेद हुँदै आएको परिस्थितिमा कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारका विषयमा यसपटकको बहस केन्दि्रत छ :
सिर्जना अधिकारी, युवा नेतृ तथा अधिकारवादी
भर्खरै सरकारबाट पास भएको कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार निवारणका लागि बनेको ऐनमा हाम्रै संस्थाले पनि वकालत गरेको थियो । मैले स्कुल पढ्दा सरले गाला चिमोटिदिने र धाप मार्ने काम अहिले बुझ्दा दुव्र्यवहार रहेछ । हरेक महिलाको जीवनमा दुव्र्यवहार हुन्छ । कुनै महिलाले मैले यस्तो समस्या भोगेको छैन भन्दा त्यो भन्दा बकवास अरू केही हुँदैन । अहिले हामी महिलाहरू घरबाट निस्कन पाउनुपर्छ, काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा बढी केन्दि्रत छौं । अब हामीले बाहिरका ती क्षेत्रमा सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ । महिलाको पहुँच र नेतृत्वको अभावका साथै आत्मविश्वासको कमीका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्छन् । दुव्र्यवहारको सबैभन्दा ठूलो कारण पुरातन सोच हो । कुनै पनि संस्थामा महिला ऐक्यबद्ध हुने हो भने कसैले केही गर्न सक्दैन । अबको महिलाको युद्ध भनेको पहिचान हो र त्यो पहिचानका लागि यस्ता हिंसा र दुव्र्यवहार सहन हुँदैन । नेपालमा महिलाका पक्षमा धेरै ऐन बनेका छन् तर धेरै कानुन बन्दा अझ अन्याय हुँदोरहेछ तसर्थ हामीले प्रस्तावनामै दुव्र्यवहारको परिभाषाभित्र के-के पर्छ ? कार्यस्थलमा हुने हिंसा भनेको छ ऐनमा तर खेतीपातीमा काम गर्ने महिलाविरुद्ध हिंसा भए कहाँ जाने ? यसको कमी छ अहिले आएको ऐनमा । ऐन बन्नु उचित हो तर त्यसको कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो ।
दुर्गा बन्जाडे, योजना अधिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग
समाजमा जे कुरा हुन्छ काम गर्ने ठाउँ वा अन्य ठाउँमा पनि त्यही हुन्छ । हामीकहाँ नीतिको होइन नियतको समस्या छ । व्यक्ति कहाँ र कसरी हुर्किएको हो त्यसमा भर पर्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ मंसिर ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । हाम्रो समाजमा यस्ता गतिविधि भैरहेको महसुस गरेरै यो ऐन आएको हो । कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीप्रति यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरिए निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ भनिएको छ तर महिलाहरू उजुरी दिनसक्ने अवस्थामै छैनन् । उनीहरूमा भोलि समाजमा कस्तो स्थिति हुने हो मेरो परिवारले के भन्ला भन्ने त्रास हुन्छ । यसको न्यूनीकरणमा स्कुलदेखि नै सहन हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ । हामीलाई तिमी छोरी हौ बोल्न हुँदैन भनेर सिकाइएको छ । हामी निजामतीतर्फका कर्मचारी सुरुदेखि लोकसेवाबाट आउने हुँदा हिंसा कम हुन्छ तर काम गर्दै जाँदा कालान्तरमा यौनभन्दा पनि अन्य दुव्र्यवहार सहँदै जानुपर्दो रहेछ । हरेक कार्यालयमा गुनासो पेटिका राख्नु प्रभावकारी हुनसक्छ । अर्को कुरा हामीले महिला-महिला भन्नुपर्दा पनि महिलाभन्दा माथि उठेर पुरुषसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले आएको ऐनले केही हदसम्म काम गर्ला तर सँगसँगै चेतना, सोच वा दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ ।
स्मृति गौडेल, अफिसर, सिद्धार्थ बैंक
कामकाजी महिलाहरूका लागि यो ठूलो समस्या हो । पुरुष पुरुषै हुन् तर महिलाले सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । महिलाहरू यस्ता समस्यामा परिणाम के हुन्छ भनेर महिला बोल्न डराउँछन् । कार्यस्थलमा हुने हिंसा वा दुव्र्यवहार कम गर्न अफिसभित्रै प्रोब्लम सल्भिङ युनिट बनाउन सकिन्छ । बैंकमा दुव्र्यवहारै नभए पनि बढुवा, तलबजस्ता कुरामा विभेद गरिन्छ । ऐन-कानुन बने पनि संस्थामा काम गर्ने मानिसले यसलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिन्छन् त्यसमा भर पर्छ । विदेशतिर हेर्दा पुरुषविरुद्ध पनि दुव्र्यवहार हुन्छ भनिन्छ तर हामीकहाँ पुरुषले मात्र महिलाप्रति दुव्र्यवहार गर्छन् भन्ने छ । दुव्र्यवहार बलियाले कमजोरलाई गर्ने भएकाले र हामीकहाँ धेरै महिला पावरमा पुग्न नसकेकाले उनीहरूमाथि बढी र लगातार दुव्र्यवहार भएको हुनसक्छ ।
सुष्मा रेग्मी, मनोवैज्ञानिक
दुव्र्यवहारका शैली फरक-फरक हुन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा जिस्काएको त हो नि भनिन्छ तर त्यसले दुव्र्यवहारमा पर्नेलाई भित्रभित्रै अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । दुव्र्यवहार भोग्ने व्यक्ति ग्लानिको सिकार हुन्छन् । उनीहरू अघि बढ्न डराउँछन् । छोरी मान्छेले धेरै हाँस्न-बोल्न हुँदैन सहनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले महिलालाई अझ दबाउँछ । जति दबेर बस्यो समस्या बढ्दै जान्छ । आफूप्रति दुव्र्यहार भएको कुरा भनियो भने भोलि आउने परिणाम के होला ? अफिसबाट निकालिनु पर्ला वा बढुवा रोकिएला अथवा सुविधा कटौती होला भन्ने त्रासले सताइरहन्छ । हामीकहाँ पनि कार्यस्थलमा भएको हिंसाका कारण आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पद-प्रतिष्ठामा भएका महिलालाई तिम्रा श्रीमान् ठूलै पोस्टमा होलान् नि भनेर पनि दुव्यर्वहार गरिन्छ । केही नहुनुभन्दा त ऐन आउनु राम्रै कुरा हो । मानसिक किसिमका दुव्र्यवहारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने चुनौतीहरू छन् । यस्ता समस्या न्यून गर्न मैले यसविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छु कि सक्दिन ? म को हुँ ? भनेर आफैंलाई चिन्न सक्नुपर्छ । आप्ना बालबालिकालाई यस विषयमा के सिकाउन सकिन्छ त्यो आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
मन्दिरा प्रजापति, एफ एण्ड बि म्यानेजर, एभरेस्ट होटल
मैले बीएचएम सक्नेबित्तिकै फाइभ स्टार होटलबाट कामको अफर आयो । यस्तो काममा रिटर्नमा केही दिनुपर्ने कुरा पनि आउँछ भन्ने चर्चा छ । होटल व्यवसाय ग्ल्यामरस भएकाले यस्ता दुव्र्यवहार हुन्छ भनिन्छ तर मैले त्यस्ता समस्या भोग्नु परेको छैन । ऐन आएको राम्रो हो तर यस्तो ऐन पनि छ है भनेर सबैलाई सूचना नदिई, यो विषयमा चेतना नजगाई ऐन मात्र आएर केही हुँदैन ।
कार्तिक ३०, २०७२ - कार्यस्थलमा भेदभाव
भाद्र २२, २०७२ - कार्यस्थलमा भेदभाव